प्रादेशिक स्वायत्तता र अखण्डता | Madhesi - United We Stand
प्रादेशिक स्वायत्तता र अखण्डता
December 7, 2006 at 2:43 pm Leaveacomment
मधेसी र दलित-जनजाति समुदायको जागरणले काठमाडौंको सत्तावृत्तलाई चिन्तित पार्न थालेको देखिन्छ । सबै राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायतका क्षेत्रहरू समान रूपमा प्रभावित पाइन्छन् । देशको राजनीतिक मूलधारको नयाँ सदस्य नेकपा -माओवादी) लाई संसदीय र व्यावहारिक राजनीतिको मूल प्रवेशद्वारमै ठूलो परीक्षाबाट गुजि्रनुपर्ने स्थिति छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्थ, परिभाषा र त्यसको बुझाई अन्य पार्टीभन्दा अपेक्षाकृत पहिले माओवादीहरूले दिनु पर्नेछ । माओवादीले अन्तरिम संसद्मा मधेसी र दलित-जनजाति समुदायबाट अधिकाधिक प्रतिनिधित्त्व गराउने निरन्तर सार्वजनिक वाचा गर्दै आएको र प्रचण्डले ब्राह्मणको जस्तो भएर पुष्पकमल दाहाल नाम मन नपरेको भनेको सन्दर्भमा समेत अन्तरिम संसद्का लागि माओवादी प्रतिनिधित्व छनोटको उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न थालिएको छ । माओवादीबाट आशानुरूपको कदमले अन्य पार्टीहरूको सोच परिवर्तनमा उदाहरणीय भूमिका खेल्नेछ ।अन्य दल पनि कम दबाबमा छैनन् । मधेसी र दलित-जनजाति समुदायमा जागरणको स्तर पर्याप्त नभए पनि पहिलाजस्तो कमजोर छैन । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अर्थ, परिभाषा र त्यसको बुझाइको व्यावहारिक प्रस्तुतिले संविधानसभामा दलहरूले पाउने मतको प्रतिशत प्रभावित हुनेछ । त्यसकारण मतको प्रतिशतको आधारमा संविधानसभामा आफ्नो संख्या बढाउन दलहरूले आफ्नो बुझाइलाई मतदाता आकषिर्त गर्नेगरी परिमार्जित र चित्तबुझ्दो रूपमा व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ ।
मधेसी र दलित-जनजाति समुदायको जागरणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सहमति देखिए पनि सम्बोधनका शैली र रणनीति फरक-फरक छन् । कतै जागरणको यस तापले सत्तावृत्तबाट विस्थापित हुनसक्ने, आफ्नो र आफ्नो समूहको वर्चस्वका बन्धन फुत्किएर जाने डरबाट उत्पन्न आक्रोशले समावेशी तथा समानुपातिक सहभागिता अथवा समतापूर्ण स्वाभिमानी उपस्थितिको मागलाई जातीय र साम्प्रदायिक भनेर नकार्ने प्रवृत्ति छ भने कतै अवसरको समवेदनशीलता मनन गरी उत्पन्न दबाब कम गर्न न्यूनतम लचकता अपनाउने मानसिकता देखिन्छ । समावेशी समानुपातिक सहभागिता तथा बराबरीको स्वाभिमानी अस्तित्वको मागलाई नैसर्गिक ठानेर यसलाई सम्बोधित गरी समतावादी समाज निर्माणलाई नयाँ नेपालको सार्थक नारा बनाउनुपर्ने विचार राख्नेहरू पनि छन्, तर संख्या धेरै छैन ।
पीडित पक्षको ज्ाहिले पनि आफ्नो कुरा उठाउनुपर्ने र विद्रोही हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसकारण उनीहरू आक्रामक र शञ्कुचित देेखिन्छन् । पीडकहरूसँग त्यस्तो कुनै समस्या हुँदैन, यथास्थिति उनको अभीष्ट हुन्छ, त्यसकारण उनीहरू कोरा आदर्शवादका कुरा गरेर प्रगतिशीलताबाट मण्डित हुने लाभसहितका दिन काट्नमात्र खोज्छन् । त्यसकारण सबैभन्दा बढी संख्या बराबरीको मागलाई जातीय र साम्प्रदायिक भनेर नकार्ने तथा आलोचना गर्नेहरूको छ । उनीहरू असमानताविरुद्ध उठिरहेको सङ्गठित मागलाई सोझै साम्प्रदायिक किटान गर्छन्, मानौं अहिलेसम्मको जातीय र साम्प्रदायिक वर्चस्वको अभ्यास सर्वथा उचित र न्यायपूर्ण होस् । यसबाट नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव छैन, न यसले देशलाई स्थायी शान्ति प्रदान गर्न सक्तछ ।
‘लोकतन्त्र’ आफैंमा पूर्ण छ, तर पारम्परिक र शास्त्रीय लोकतन्त्रको अभ्यासले विभेदी समाज र असमानताको ठूलो अन्तराल मेट्न सम्भव छैन । टकिस फोटोपाउलसले यसै तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी समावेशी लोकतन्त्रको वकालत थालेका
थिए । पारम्परिक र शास्त्रीय लोकतन्त्रको अभ्यासले विश्वमा उत्पन्न विसंगतिहरूको जुन उदाहरण उनले आफ्ना अभिव्यक्तिमा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसबाट नेपाल अलिकति पनि अलग छैन । यहाँको सङ्कट बहुआयामी छ ।
राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा लगभग सबै निर्णय यहाँको जनसंख्याको एक तिहाइ राजधानीवासी र पहाडका उच्च जातिहरूबाट मात्र हुने गर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा न्यून उपस्थितिका कारण आफ्ना समस्या सही पहिचान गरी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा उत्पीडित समुदाय सक्षम छैनन् ।
हरेक क्षेत्रमा सम्पूर्ण जनसंख्याको समानुपातिक सहभागिता तथा निर्णयात्मक उपस्थिति अत्यावश्यक छ । समतावादी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो भने राजनेताहरूले मधेसी र दलित-जनजाति समुदायबाट प्रस्तुत मागहरूमा लुकेको मर्म तथा सल्किरहेको आक्रोश एकसाथ महसुस गर्नु जरुरी छ । देश संविधान निर्माण प्रक्रियामा अग्रसर रहेको बेला नेताहरू केन्द्रीय स्तरमा समानुपातिक सहभागितायुक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा स्वशासित प्रदेशहरूसहितको गणतान्त्रिक सङ्घीय संरचना निर्माणमा अग्रसर हुन जरुरी छ ।
स्वशासित प्रदेशहरूको मागलाई यथास्थितिवादीहरूले विखण्डनवाद र अलगाववादी प्रवृत्ति भनेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् । उनीहरू यसबाट राष्ट्रिय विकास अवरुद्ध हुन्छ, केन्द्रीय नियन्त्रणको अभावमा शान्ति-सुरक्षा कमजोर हुन्छ जस्ता तर्कसाथै स्वशासित प्रदेशमा अल्पसंख्यक असुरक्षित र दबाबमा पर्छन् भन्ने गर्छन् । यस्तो तर्क वास्तविक होइन । स्वशासित प्रदेशको मागसँगै संयोजनकारी केन्द्रीय विधायिका, सरकार तथा राष्ट्रिय अखण्डताप्रति प्रतिबद्धता जोडिएको हुन्छ । अर्को शब्दमा राज्यको सङ्घीय संरचनाको अवधारणा मूलतः राष्ट्रिय अखण्डता तथा एकताको आवश्यकतामाथि आधारित हुन्छ । सङ्घीय संरचना भनेको त्यसकारण सँगै बस्ने, एक-अर्काको समान सम्मान, अस्तित्व र उपस्थिति तथा भूमिकाको पहिचानप्रतिको प्रतिबद्धता हो । राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणका बढी र बलिया सम्भावनाहरूको अपेक्षित संश्लेषणको सहज प्रक्रिया यसैमा गतिशील हुन्छ । यस्ता माग समयमै सम्बोधन गर्न सफल मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता झन्-झन् मजबुत भएका छन् ।
पूर्वी पाकिस्तानको जायज आह्वानको बेवास्ता भयो, परिणामस्वरूप बंगलादेशको उदय भयो । भारतमा सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा उठेको गोरखाल्यान्डको माग अन्ततः सम्बोधित भयो र आज त्यहाँ शान्ति छ । दक्षिण भारतीय राज्यहरू सङ्घीय स्वरूपका कारणले दिनानुदिन विकसित भइरहेका छन् र भारतको अखण्डतालाई बल प्रदान गरिरहेका छन् । दुनियाँका ती राष्ट्र जसले सङ्घीय स्वरूप र क्षेत्रीय स्वशासनलाई अँगालेको छ, विश्वको मानचित्रमा उन्नत र प्रतिष्ठित छन् । विविधताको देश भारत स्वशासित प्रदेशहरूकै कारण अखण्ड र एकजुट रहनसकेको छ । यसरी स्वशासित प्रदेशहरू भएको सङ्घीय स्वरूपको गठन भनेको देशभित्र क्षेत्रीय पहिचानको स्वीकृति हो भने यसको अस्वीकृति विखण्डन र अलगावतिर धकेल्ने नकारात्मक सोच हो र त्यसकारणले देशको अखण्डताको असली शत्रु पनि ।
स्वशासित प्रदेशहरूका लागि उठ्ने माग विखण्डन र अलगाववादमा परिणत हुनसक्छ -दुनियाँमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू पनि छन् ।) तर त्यस्तो परिणतिको सदैव एउटै कारण हुने गर्छ- पीडित पक्षको मागप्रतिको बेवास्ता । श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, सुडान, इन्डोनेसिया, चेचेन्या आदि यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तिम्रा माग जायज छन्, शोषण भएको छ, राज्यका तन्त्रहरूमा उपस्थिति पनि एकदमै न्यून छ, तर देशको अखण्डताको नाममा यिनलाई थाती राख । हाम्रो वर्चस्व स्वीकारेर शान्ति र सहिष्णुताको नाममा चुप लाग । राष्ट्रियताको नाममा आफ्ना क्षेत्रीय संस्कृति, रहन-सहन र भाषालाई तिलाञ्जली देऊ । यस्ता तर्कलाई के भन्ने ? के सम्बोधनको यस्तो शैली स्वीकार्य हुन सक्तछ ? आफ्नो सम्मानजनक भूमिका र उपस्थिति प्रत्याभूतिको माग गर्ने मधेसी तथा दलित-जनजाति समुदायलाई हाम्रो मागको उचित सम्बोधन यहाँ असम्भव र लाज लागेर आयो भने देश कस्तो भुमरीमा पर्न सक्तछ भन्ने अन्दाज गरी नेताहरूले कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो ।
प्रमुख दलहरूले यस्ता पीडित समुदायहरूसँग अन्तरक्रियासम्म गर्न चाहेका छैनन् । बहसका निम्ति वैकल्पिक विचारहरूको प्रस्तुति खोजिएको छैन । यस्ता समुदायका आफ्नै जनाधार भएका राजनीतिकर्मी, विशेषज्ञ तथा अधिकारकर्मीसँग गम्भीर विश्लेषणसम्म भइरहेको छैन । प्रतिनिधित्व देखाउन पोस्टर निर्माणबाट समस्याको सम्बोधन हुन सक्तैन । माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्त्व पंक्तिमा दलित-जनजातिको प्रभावकारी उपस्थिति भएको कारणले माओवादी वृत्तभित्र यसबारे विचार-विमर्श हुने गरेको संकेत पाइन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वपछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक एजेन्डाप्रति प्रमुख दलहरू भने मौन बस्दैछन् । यसले अन्तरक्रिया, शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्नेलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ र युवा जमातलाई अर्को बाटोमा हुत्याउन सक्तछ ।
मध्यतराईमा धूलो दूध कारखाना	case Study – Settling Susta Border Dispute